Iindaba -I-FedEx yamaxhoba okudubula afumana inkxaso-mali kwingxowa-mali yoluntu
I-Indianapolis-Iiveki ezintandathu zidlulile okoko indoda enompu yabulala abantu abasibhozo kwiziko lomhlaba leFedEx eIndianapolis.
Ngelo xesha, uluntu lumbutho wokuxhasa amaxhoba, abasindileyo kunye neentsapho zabo, kwaye bakhulisa ngaphezulu kwe- $ 1.5 yezigidi.
"Xa ezo ziganeko zisenzeka, abantu baziva bengenakuzinceda kwaye bafuna ukunceda," utshilo uJeffrey Dion, umlawuli olawulayo weNational Sympathy Foundation.
I-National Sympathy Foundation iqokelela kwaye isasaze iminikelo yesisa emva kolwaphulo-mthetho olunobundlobongela.
Oku kubandakanya usapho lwexhoba, abonzakeleyo nabantu abakhoyo. Ingxowa-mali iya kuhlala ivulekile iiveki ezininzi.
Emva koko, uluntu olukhokelayo lwasekuhlaleni luya kubamba indibano kwiholo ledolophu yoluntu ukuze lenze imigaqo yokulawula ingxowa-mali.
U-Aasees Kaur, uMxhasi wezoMthetho kunye noMphathi weeNkonzo zoLuntu weSikh Union, uthe: “Kuyachukumisa ukwazi ukuba abantu basahoya iimfuno zeyona ntsapho ichaphazelekayo.”
Siyazi ukuba ilizwe labo alikatshintshi, kwaye usizi lwabo luza kuba lude kwaye lube nzima, utshilo uKaul.
"Fumana inkxaso kangangoko kunokwenzeka kuluntu olukhulu, kwaye ngcono siya kuba," utshilo uKaul.
Ilungelo lokushicilela 2021 Nexstar Media Inc. onke amalungelo agciniwe. Ezi zinto azinakupapashwa, zisasazwe, ziphinde zibhalwe, okanye ziphinde zisasazwe.
I-Indianapolis-Wonke umntu kufuneka azive ekhuselekile ekhayeni lakhe. Olu lulwazi olwabiwe ngamagosa e-IMPD kunye nomphathi olawulayo we-Indianapolis Housing Authority nabamelwane ngexesha lomnyhadala wokuqala we "Barbecue and Chill".
Xa abantwana babuyela kuluntu lwaseBlackburn Terrace ukusuka kusuku lokugqibela lwesikolo kulo nyaka, badibana nepiknik kunye nemidlalo ebonelelwe yi-IMPD kunye ne-IHA. Ukubuyela umva kwe-Niheim Hines's Indianapolis Colts nako kuye kwafika lo msitho.
I-Indianapolis -Ukuba ubungakhange uye kwii-Bankers Life Fieldhouse kutshanje, ungothuka xa uphinda ufika kumbindi wedolophu.
Ixesha lokwakha liyaqhubeka, kwaye imihlali yabalandeli ithathelwe indawo ngumgqumo woomatshini abakhulu. Iqela lePacers Sports Entertainment lathi liyakuba "yintsimi yekamva elizayo", kuvulelwa indlela wonke umntu, hayi abalandeli bebhasikithi, ukuba bonwabe.
Indianapolis - Abasemagunyeni bafuna uncedo lukarhulumente ekufumaneni owasetyhini olishiyileyo iziko lonyango laseMorgantown.
Ixesha lokuphumla laseGuangzhou libonelela nge-DHL / FedEx / UPS / TNT yokuthumela kumazwe aphesheya